Ndakasvirwa nemukomana wemombe pasi pemuuyu kuchinaya! – Makuhwa.co.zw
Kusvirwa nemukomana wemombe pasi pemuuyu kuchinaya! Ndakanaiwa ndichibva kuchigawo zviri unexpected.Ndokusangana naFincho mukomana ayifudza mombe akahwanda pasi pemuuyu.Raincoat yandanga ndinayo ndakazofukidza hupfu hwaive muchisaga mubhara thereby sacrificing myself to these large torrents dzemvura, semunhu anga akamiriramaresults e O’ level and ndine confidence dzekupasa ndakangoti life goes on, as long as I pass I won’t entertain this kind of life again,I will be driving my own car and owning my own crib. Saka mvura yakaramba ichinaya so I thought of finding a shelter under this big Muuyu tree just close to our village. Ndakakungurutsa bhara chop-chop svikei pasi pemuti wanike pakaomawo zveshuwa plus pakaveswa moto, Pheneus aive nejana remombe anga anzwa nekunaiwa saka anga avakuzvidziisawo.
Patakamhorosana akaramba akatarisa pachifuva changu ndipo pandakazoyeuka kuti
ndakange ndisina kupfeka braaa saka ka blousers kakanamirana nemazamu minyatso
yese iri pachena. Shiit, ndakazvituka nechemumwoyo but I knew it was too late, mvura yakatowedzera saka it was quite positive kuti hapana munhu achauya ende ukaona mombe dzaiita stand still woziva kuti chachaya, again it was an advantage kuna Fincho sekudanwa kwaiitwa Phenius. Fincho haana chaakataura but the environment was now tense, Fincho
anga ari mutema akasimba but very respectful and smart, ndakangoti “eh, kurikunaya
zvakaoma,” in a bid to break the code of silence iye ndokuti ehe, wanaiwa wena mazamu ako abva anamatirana nehembe, ndokunyarara hake.
I felt uneasy, ndakazotanga kumutarisawo kabisira wanike mujean make muri kufema,
ndakarohwa nehana iye akazviona akaramba hake anyerere. Ndakatanga kufunga nyaya yainzi Fincho aive zimhunzwa mundove coz recently ayinzi ayipinda mumba mamai Maka usiki obuda kwavakuedza, zvainzi this started paakapfirira kitchen yavo and the lady took
advantage of this poor young man sezvo baba Maka vaipedza three months vari kuHarare
vasati vambouya.I was startled by a lightning and a thunderbolt yakarova some kilometres
from where we were and I nearly fell over Fincho but I had to stretch my hand to balance on his shoulder, he did not even move an inch akaramba zvake achidziya moto, “sorry , ndavhunduka wena” , iye akapindura “ its okay, vasikana vose vanotya saka ndazvijaira”
Related Topics:Ndakasvirwa nemukomana wemombe
Ndakasvirwa nemukomana wemombe kumusha ndikabva ndakanganwa kuti ndine murume!